यस्ताे चमत्कारी विरुवा जुन घरको यो दिशामा लगाउनु भयाे भने धनको कमि कहियै हुदैन ! – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २८, २०७८ समय: १३:०७:०८
यस्ताे चमत्कारी विरुवा जुन घरको यो दिशामा लगाउनु भयाे भने धनको कमि कहियै हुदैन ! हरेक मानिसको भाग्यमा कुनै कुनै माध्यमबाट धन सम्पत्ति कमाउने योग बनिरहेको हुन्छ । योगको आधारमा मानिसले मेहनत गर्छन् र मेहनत अनुसार कसैलाई राम्रो र सजिलो हुन्छ भने कसैलाई क`ष्ट हुन्छ ।
सजिलो र गा`ह्रो भनेको मनिसको आफ्नो पूर्व जन्मको कर्म पनि हो भनेर गितामा उल्लेख गरिएको छ । पैसाका लागि मानिसले धेरै तरिकाबाट काम गरेर कमाउने गर्नेछन् । थोरै मानिसले मात्रै जान्ने क्रासुला, तिव्बतियन वास्तु शास्त्रमा मनी ट्री भनेर पनि चिनिएको । वास्तु शास्त्रका अनुसार यसको महत्त्व फेंगशुमा अत्याधिक महत्व दिएकाले पश्चिमी देशहरुमा यसको माग अत्याधिक रहेको छ ।
कस्तो हुन्छ बनावट:- क्रासुला नामको यो विरुवाको पात चौडा आकारको हुने गर्दछ। जुन निकै नरम हुने गर्दछ। यस विरुवाको हात लगाउँदा ओइलाउने, घुम्चिने, पहेँलो हुने हुँदैन्।
कहाँ लगाउने:- वास्तुशास्त्रका अनुसार यस विरुवालाई घरको मुख्य ढोकाको अगाडि लगाउनुहोस्। यस विरुवाले घरमा धन भित्र्याउने भएकाले यसलाई दाहिने पारेर राख्ने गर्नुहोस्। यदी तपाईको यसलाई यसरी राख्नुभयो भने केही समयमै यसको असर देखिन सुरु हुने गर्दछ।
सजिलै घरमा राख्न सकिन्छ:- यस विरुवाको हेरचाह गर्न निकै सजिलो हुने गर्दछ। क्रासुला घरभित्र छायामा पनि बढ्ने गर्दछ। यसले धेरै भाग ओगट्ने भएकाले यसलाई गमलामा लगाउनु राम्रो मानिन्छ।